Google Codes Uyezve: iyo yakavhurwa sosi imwe kero yepositi | Linux Vakapindwa muropa
Unogona kunge watonzwa nezve google plus macode, kana pamwe hausati wazvitsvaga. Nhasi ticha taura zvishoma nezve iyi inonakidza yepasirese imwe nzira yepositi uye yakavhurwa sosi kero. Neprojekti iyi, Google inotarisira kupa kero kunzvimbo idzodzo kana vanhu vasina kero parizvino, kunyanya yakanangana nenyika dzichiri kusimukira dzinoda zvimwe zviwanikwa zve geolocation uye vanozove vashandisi venguva yemberi vanozowana mukana weInternet.
Vashandisi vanotevera mabhiriyoni veInternet ndezvenyika idzi dzichiri kusimukira uye havana mukana wekuwanikwa, nekudaro neGoogle pamwe nemakhodhi anogona kuve kuisa nzvimbo kudzimba dzavo kana kumabhizinesi. Uye izvi hazvishamise, nekuti sekumwe kuongorora kwakaitwa neWorld Bank, hafu yevagari vemunyika vanogara mumigwagwa isina mazita kana nzvimbo dzisina kero. Iyi inonakidza projekiti yakasimudzirwa neiyo fundo iyo Google yakaratidza.
Vasina kero, havagone kuratidza zvine mutsindo kwavanogara, uye izvo zvinogona kutungamira mukukanganisa nzvimbo zhinji dzehupenyu dzatinofunga dzakajairika munyika yekutanga. Nekuda kwekushomeka, iyo yepasi rose uye yakavhurwa sosi purojekiti isu tiri kutaura nezve nhasi, kuitira kuti zvikamu zvese zvepasi zviwane nzvimbo yakatarwa nekuwana aya macode nenzira iri nyore uye yemahara iine mavara gumi chete anozoita sekero.
Plus macode ari nyore uye ari nyore kushandisa, neaya Mavara gumi akaumbwa nekodhi nzvimbo yemavara mana (inosanganisira 100 × 100 makiromita), uye kodhi yemuno inoumbwa nemamwe mavara mana (vavakidzani uye chivakwa, nzvimbo dzinoverengeka dze14 × 14 metres), chiratidzo chekuwedzera uye mamwe mavara maviri (kudoma mamwe 3x3m) . Iwo akavakirwa pane latitude nehurefu saka ivo vanokwanisa kutarisisa chero poindi papasi rinoenderana negidhi. Uye zvese kuburikidza neGoogle Mepu ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google Codes Uyezve: iyo yakavhurwa sosi imwe kero yepositi
Chokwadi ndechekuti ndinoona zvichinetsekana kusiya zvese mumaoko emarudzi mazhinji seGoogle, iyo inosanganisirwa nehukuru hwevasori.
Izvi zvakanakisa, asi munyika umo kuchengetedzeka kwemunhu inyaya yakanyanya kusimba kana isiri iyo inonyanya kukosha, nyaya ndeyekuti kupa kurongeka senge kwataurwa pano ku geolocate kero zvakare kune njodzi yekuti vanhu vasina kutendeka vanogona kurwisa kana kushandisa ruzivo rwakadai. kukonzera kukuvadza uye zvakatonyanya kufa kwevanhu vanoshandisa kodhi!
Imwe nzira ndeyekuti pachinzvimbo chekuti ive chaiyo, uye sezvinoitwa nepositi kero, iyo imwechete kodhi inogona kushandiswa asi pasina kupa iko iko kwenzvimbo asi nzvimbo kana nharaunda, ndiyo sarudzo kune avo vedu vanogara pasi njodzi dzekuve imwezve nhamba munhau dzevanhu vanotambura nekusachengeteka
Ndinovimba ndakazviita kuti ndinzwisisike
Ubuntu 18.04 beta ikozvino inowanika kugoverwa kwepamutemo